China Soft PVC Photo Frames ifektri abakhiqizi | SJJ
I-Soft PVC Photo Frame iyithuluzi elihle lokukhombisa impilo yakho enhle hhayi kuphela endlini yakho noma edeskini lakho, kodwa nakwezinye izikhathi ezifana nombukiso noma umbukiso. Yenziwe ngezinto ezithambile ze-PVC, ezomnotho nezemvelo. Isici esiqinile sisiza ukuvikela izithombe, hhayi ukuphuka njenge-g ...
I-Soft PVC Photo Frame iyithuluzi elihle lokukhombisa impilo yakho enhle hhayi kuphela endlini yakho noma edeskini lakho, kodwa nakwezinye izikhathi ezifana nombukiso noma umbukiso. Yenziwe ngezinto ezithambile ze-PVC, ezomnotho nezemvelo. Isici esiqinile sisiza ukuvikela izithombe, hhayi ukuphuka njengeglasi. Futhi iSoft PVC iyamelana namanzi ukuvikela izithombe. Zingasetshenziswa isikhathi eside, asikho isidingo sokushintsha kaningi, hhayi nje kuphela ukuba nazo zonke izinhlobo zobunjwa nemibala, ama-logo nawo angadalwa ngokwenu. Izimpawu ze-2D noma ze-3D zingenziwa kucezu olufanayo, futhi imininingwane yobukhulu ikwakho. Imiklamo yokusetha iyathandeka kakhulu esikhathini sanamuhla, futhi iphakethe lingahlukahluka ukuvikela ozimele. Ngokunamathiselwa okuhlukile kokusekelwa ngama-engeli ahlukene, ama-PVC Photo Frames aveza izici ezahlukahlukene zezithombe. Siyakwazi ukukhiqiza izinto ngekhwalithi ephezulu ngesikhathi esifushane sokukhiqiza.
Imibala: Ingafanisa umbala we-PMS
Ukuqeda: kumibalabala ngokuya ngemfuneko yakho
Izinketho Zokunamathisela Okuvamile: Umnikazi wokhuni, umnikazi we-PVC, akukho okunamathiselwe ekusekelweni, i-hook nokunye.
Langaphambilini I-Soft PVC Bottle Openers
Olandelayo: Ama-Wristband & Amasongo weSoft PVC
I-Fidget Spinner Bottle Opener Keychain